दशकमा त्रिशुलीले निल्यो ६२४ जना - विवेचना
दशकमा त्रिशुलीले निल्यो ६२४ जना
February 13, 2018 327 Views
झापा । त्रिशुली नदी किनारा हुँदै सडकमार्गमा यात्रा गर्ने सबै यात्रुहरूलाई यो क्षेत्रमा हुने दुर्घटनाका समाचारले सधैँ झस्काइरहन्छन् । हुन पनि, त्रिशुली नदी किनारको सडक दुर्घटनामा परी एक दशकयता ६२४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने कम्तिमा पनि ११ सय जना बढीको अंगभंग भएको छ ।
शनिबार बिहान मात्रै सिँचाइ सचिव रमानान्द यादवसहित तीनजनाको त्रिशुलीमा सवारी खसी ज्यान गुम्यो । २०६३ यता पृथ्वी राजमार्गसहितको धादिङदेखि चितवनसम्म त्रिशुली किनारको सडक छुँदा ६२४ जनाले ज्यान गुमाए ।
गएको ५ महिनामा मात्रै त्रिशुलीले ६३ जनालाई निलिसकेको छ । असोजयता ७९ जना गम्भीर घाइते र ८१ जना सामान्य घाइते भइसकेका छन् । ‘चालक निदाउने, अप्ठ्यारो बाटोमा ओभरटेक गर्दा तथा साँघुरो बाटोमा तीव्र गतिमा सवारी कुदाउँदा दुर्घटना ज्यादा भएको पाइन्छ’, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कृष्ण सापकोटा भन्छन्, ‘यस्तो बाटोमा चालकको असावधानी नै दुर्घटनाको प्रमुख कारणजस्तो देखिन्छ ।’
गत आर्थिक वर्षको सरकारी तथ्यांकअनुसार त्रिशुलीमा ११ सय सवारी दुर्घटना भएका थिए । त्यसकारण पनि मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालयले यो सडकलाई दुर्घटनाको ‘रेडजोन’ मा राखेको थियो । यो सडकखण्डमा भिआइपीदेखि भारतीय तीर्थयात्रीसम्मको दुर्घटना भइसकेको छ ।
९ वैशाख २०७२ मा धादिङको नौबिसेमा बस दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु भयो । ती भारतीय तीर्थयात्री थिए । धादिङ ट्राफिक प्रहरीका अनुसार ०७२ देखि ०७४ सम्ममा मात्र त्रिशुलीमा झन्डै सयवटा सवारी दुर्घटना हुँदा एक सय ३० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यस वर्षको सुरूवाती महिनादेखि नै त्रिशुलीमा दुर्घटनाको दर अझ पेचिलो बनेको छ । ‘निर्माण भइरहेको सडकको साँघुरोपन र सवारीको बढ्दो चापले दुर्घटनाको दर पनि बढिरहेको छ’, प्रहरी निरीक्षक सापकोटा थप्छन् । गत साउनदेखि माघ अन्तिमसम्ममा धादिङ-त्रिशुली सडक खण्डमा ६२ वटा ठूलो मानवीय क्षतिसहितका दुर्घटना भएका छन् । असोजअघि साउन र भदौमा मात्र ७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ५ जना गम्भीर घाइते भएका थिए ।
यस खण्डमा साना र ठूला दुर्घटना नभएको दिन सायदै हुने गरेको छ । कहिले रोकिरहेको सवारीमा पछाडिबाट ठक्कर दिँदा त्रिशुलीमा सवारी खस्ने गरेको छ । यात्रु र प्रत्यक्षदर्शीले दुर्घटनाको दोष चालकलाई दिन्छन् । चालकले मदिरा सेवन गरी गाडी चलाउने, निदाउने र सडक साँघुरो भएकाले दुर्घटना बढेका छन् ।
मुग्लिन-नारायणगढसहित राजमार्गअन्तर्गतको ९५ किलोमिटर त्रिशुली किनार हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने सडकमा पहिरो खस्ने, जाम हुने भन्दै चालक मानसिक तनावमा गाडी चलाउने कारणले पनि दुर्घटनाको ग्राफ बढिरहेको सुरक्षा अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । सडकसँगै यहाँ रहेका साना तथा मझौला पुल जीर्ण छन्, एकतर्फी गाडी चलाउनुपर्ने बाध्यताले कतिपय मालबाहक ट्रक त्यहीँबाट त्रिशुलीमा खसेका छन् ।
धादिङ प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक धु्रवराज रावतले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सक्रियता देखाए पनि बढेकोमा दु:ख जनाए । ‘चालकहरूमा अनुशासनको कमि, अनावश्यक ओभरटेक गर्ने होड, यातायातका साधनको बृद्धि र सडकको पुनर्निर्माण तथा मर्मत नहुँदा दुर्घटना बढिरहेका छन्’, रावत भन्छन् ।
त्रिशुलीमा दुर्घटना भएका तथ्यांक धादिङसँगै चितवन प्रहरीसँग पनि उही मात्रमा रहेको छ । चितवन क्षेत्रमा पनि यही समस्याले गाँजिरहेको प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दिपक थापा बताउँछन् । भर्खरै चितवनको जिम्मेवारी लिएका थापा थप्छन्, ‘जहाँ अप्ठ्यारो मोड आउँछ, त्यहीँ चालक निदाएकाले पनि ठूला दुर्घटना भएका तथ्यांक प्रहरीसँग छन् । कतिपय दुर्घटना तीव्र गतिका कारण हुने गरेको भेटिन्छ ।’
लामो दूरीको यात्रामा सवारी चलाउँदा चालक थाक्ने गरेका कारणले पनि त्रिशुली खण्डको साँघुरो बाटोमा सवारी दुर्घटना तीव्रताका साथ बढेको हो । एसपी थापाका अनुसार मुग्लिनदेखि धादिङको मौवा खोलासम्म त्रिशुलीको तिरैतिर २७ किमि र मुग्लिनदेखि जुगेडीसम्म साढे २५ किलोमिटर दूरीमा दुर्घटनाको ग्राफ निकै ठूलो छ ।
तीन भिआइपी जो गए
२०७४ माघ २७ गते बिहान बा. २ झ ३१४० नम्बरको जीप धादिङ बेनीघाट रोराङ गापा वडा नम्बर ३ सलाङघाटस्थित त्रिशुली नदीमा खस्दा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रमानन्द यादवको मृत्यु भयो । उनीका छोरा सन्तोष यादव र अर्की युवती उन्नति गुप्ताको पनि दुर्घटनामा मृत्यु भयो ।
२०७३ अशोज ९ गते बा. ९ च १५३१ नम्बरको जीप दाह्रेचोक-३ घोप्टेभिरबाट त्रिशुली खस्दा पूर्वृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे अहिलेसम्म बेपत्ता छन् । घटनामा उनका दुई भाइ पनि सँगै थिए । उनीहरू दुवैको मृत्यु भएको थियो । २०५० जेठ ३ गते चितवन जिल्लाको दासढुंगामा भएको दुर्घटनामा तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन भएको थियो ।
Previous व्रतमध्ये सर्वोत्तम महाशिवरात्रि देशभर मनाइँदैछ
Next ‘बुद्धशान्ति’ साप्ताहिक विमोचित